Umenzi wokuPakisha oguquguqukayo kunye neengxowa zokuPakisha ukutya uMvelisi/uMboneleli | I-DQ PACK
I-DQ PACK - Umenzi wokupakisha oguquguqukayo kwaye ugxile kushishino loshicilelo ngaphezulu kweminyaka engama-31. Umnxeba: +86-18125839585 I-imeyile:dqpack@danqing.net
Sukuma Spout Pouch
Phakamisa isingxobo sikaZipper
Yima Phantsi Isingxobo esiGciniweyo seJuice
Isingxobo seSide seSithathu seSide
Iifilimu zokuPakisha eziprintiweyo
Ifilimu yesithintelo esiPhakamileyo kwiFomu yoQoqo
Ifilimu yePvc Shrink Sleeve
Ifilimu yePet Twist yeCandy
Umqulu oshicilelweyo wokuPakisha ifilimu
IFilimu yeBanga lokutya
I-Pp, i-pvc, i-pet, i-inike iFilimu yeCupsealing enokwenzeka
Die Sika Handle Bag
Isingxobo sokuPakisha Ngoshishino
Iingxowa zokupakisha ikofu/iti
Ibhegi yokuPakisha ukutya kwezilwanyana
Isingxobo sokuPakisha sePad ecocekileyo
Isingxobo sePowder yokuPakisha iDetergent
Iingxowa zokuPakisha ukutya
Iingxowa zokupakisha zokuthambisa
Iingxowa zeziqhamo ezitsha
Iingxowa zokupakisha ze-Candy Biscuit Ice Cream
I-Popcorn Packaging Bag
I-Snack Food Packaging
Ikofu kunye neTea yokuPakisha
Ukupakishwa kokutya kwezilwanyana
Ukupakishwa kweeMveliso zokuCosmetic kunye noNonophelo loBuqu
I-DQ PACK-FLEXIBLE PACKAGING MANUFACTUREER UKUSUSELA ngo-1991
Inkonzo yokwenza ngokwezifiso iipowutshi zokuma kunye neengxowa zokupakisha ukutya
YIMISA IPOUCH ENESPOUT
Isingxobo seSpout sineengenelo zokuqina komoya, ubungqina bokufuma kwaye akukho kuvuza. Inokuphepha ngokufanelekileyo ukukhanya kunye nokwandisa ixesha lokuphelelwa kweemveliso.
YIMISA IPUCH NGEZIPPER
I-DQ PACK ixhotyiswe nge-6 yokupakisha ngokuzenzekelayo kunye nemigca yokushicilela, imigca ye-4 ephezulu ye-solvent-free lamination. Yonke inkqubo yethu yokuvelisa iqhutywa ngokuhambelana neemfuno ze-ISO9001-2018 BRC.
Njengomkhokheliumenzi wokupakisha oguquguqukayo, umenzi wokupakisha ukutya, kwaye ume umthengisi wepouch, iDQ Pack igxile kushishino loshicilelo ukusukela ngo-1991.
Yonke inkqubo yethu yokuvelisa iqhutywa ngokuhambelana neemfuno ze-ISO9001-2018.Kwaye uphawu lwethu lwentengiso "i-DQ PACK CN" iye yaba yigama le-brand eyaziwayo eligcina indawo ehamba phambili ngaphakathi kweemarike zasekhaya ze-laminated flexible packaging kunye neendawo zokuprinta.
Iingxowa zokupakisha eziguquguqukayo zisetyenziselwa kakhulu ikofu& ukupakishwa kweti, ukupakishwa kokutya, ukupakishwa kwesiselo sejusi, ukupakishwa kokutya kwesilwanyana sasekhaya, njl.
Yima phezulu Zipper Pouch
Ibhegi ye-zipper yokutya
Ingxowa yeelekese imilo ekhethekileyo
ULungiselelo lwethu-Ubuchwephesha& Esebenzayo
Sibonelele nge-OEM&I-ODM yenza iingxowa zokupakisha ukutya kunye nenkonzo yokupakisha eguquguqukayo iminyaka engama-25. Nokuba zithini na iimfuno zakho, ulwazi lwethu olubanzi kunye namava akuqinisekisa ngesiphumo esanelisayo. Sibeka umzamo wethu omkhulu wokunikezela ngekhwalithi elungileyo, inkonzo eyanelisayo, ixabiso elikhuphisanayo, ukuhanjiswa kwangexesha kubathengi bethu abaxabisekileyo. Sinokwenza umbala wobungqina obunzima kunye nemveliso yokugqibela yoshicilelo ihambelane ngaphezu kwe-98%. Ukuba ukhangela isiko abenzi iingxowa ukupakisha ukutya, yima umenzi pouch okanye umenzi wokupakisha oguquguqukayo, wamkelekile ukuba uqhagamshelane DQ PACK.
Ukuveliswa okanye ukurhweba ngezinto ezilungileyo okanye iinkonzo ezithengiswayo
Imveliso yovavanyo& Isampulu yoQinisekiso
Sijonge ukuqonda iimfuno zakho ngocoselelo ukunciphisa umngcipheko weprojekthi
. Inkonzo kunye neNkxaso
ukupakisha iimveliso zakho
I-DQ PACK yamkela ifilosofi yayo "ebonelela ngezibonelelo kubasebenzi, ukuthatha uxanduva kuluntu", ejolise ekuzameni ukuba ngoyena ubalaseleyo.
iqabane elivela kwimarike yasekhaya kubathengi behlabathi kunye nababoneleli.
Igubungela ummandla womgangatho osebenzisekayo opheleleyo wama-35,000 eemitha zesikweri kwaye iza nezixhobo ezi-6 zokupakishwa ezizenzekelayo kunye nemigca yokushicilela, imigca emi-4 ephucukileyo enesantya esiphezulu engenakunyibilika.
I-DQ PACK iye yaqinisekiswa yi-BV, i-FDA, i-SGS kunye ne-GMC, kunye ne-ISO9001-2018 inkqubo yokulawula umgangatho.
Sinikezela ngenkonzo yokuma yokudibanisa uyilo, umlinganiselo, imveliso, ukuhanjiswa, ukufakwa, kunye nenkonzo emva kokuthengisa.
Imithetho yokubekwa emgangathweni kwenkqubo yemveliso engqongqo, izigidi ezili-18 zeeodolo ezivela kumazwe angaphandle.
I-DQ PACK iqalise ukuzinikela kwayo ekuboneleleni ukupakishwa okuguquguqukayo kunye nezisombululo zokushicilela kwi-1991. Ngokusekelwe kwiPhondo lase-Guangdong, inkampani yethu inabasebenzi abangaphezu kwama-200 kunye ne-30,000 yeemitha ze-square zamaziko e-Dongshanhu Industrial Park.
Iworkshop yethu yokwenziwa kwemveliso igubungela ummandla okumgangatho osetyenziswayo oziimitha ezingama-35,000 kwaye iza nezixhobo ezi-6 zokupakishwa ezizenzekelayo kunye nemigca yoshicilelo, imigca emi-4 ephucukileyo enesantya esiphezulu engenakunyibilika. Inkqubo yethu yonke yemveliso iqhutywa ngokuhambelana neemfuno zeISO9001-2018, kunye ne-trademark yethu "i-DQ PACK CN" ibe yigama elidumileyo eligcina indawo ehamba phambili ngaphakathi kweemarike zasekhaya ze-laminated flexible packaging and printing fields. Njengenkampani ehamba phambili yokupakisha eguquguqukayo ekwazi ukuziqhubela ngaphandle kwimarike yoshicilelo yasekhaya, i-DQ PACK iseke amasebe eMalaysia naseHong Kong ngokulandelelanayo.i
Izisombululo zesiko le-OEM, yenza ngokwezifiso ukupakishwa kwakho.
200+ abasebenzi benkampani, iingcali zeR&D iqela.
Indawo yesityalo yi-30000+ square metres.
100+ abayili kunye neqela lobuchwephesha lobuchwephesha.
Yonke inkqubo yethu yokuvelisa iqhutyelwa ngokuhambelana neemfuno ze-ISO9001-2018, kwaye uphawu lwethu lokuthengisa "i-DQ PACK CN" ibe yigama le-brand eyaziwayo eligcina indawo ehamba phambili kwiimarike zasekhaya ze-laminated flexible packaging and printing fields.
Itheko lokuzalwa labasebenzi
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso okanye iinkonzo zethu, zive ukhululekile ukufikelela kwiqela lenkonzo yabathengi. Nikeza ngamava awodwa kuye wonke umntu obandakanyekayo nophawu. Sinexabiso elikhethekileyo kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu ukwenzela wena.
Emva kovavanyo lwasendle olwenziwa ngamaqumrhu eetifiketi eziphambili zehlabathi kwisiza, i-DQ PACK iye yaqinisekiswa yi-BV, FDA, SGS kunye ne-GMC, kunye ne-ISO9001-2018 inkqubo yolawulo lomgangatho.
Abafowunelwa: UNksz Anna
Idilesi: I-Dongshanhu Industrial Park, iSithili saseChaoan, iSixeko saseChaozhou, eGuangdong, eChina
Siqinisekile ukuba sithi inkonzo yethu yokwenza ngokwezifiso intle kakhulu.